HALKAAN KA AKHRISO WAA WARARKA WARGEYSKA MOGADISHU TIMES DAILY NEWS PAPER EE MAANTA OO AH SABTI 10-KA AGOOSTO 2019-KA
Saturday August 10, 2019 - 09:45:24 in Wararka by Mogadishu Times
GAROONKA KUBADDA CAGTA EE KOONIS OO LOOGU MAGAC DARAY MARXUUN ENG YARIISOW Kulan loogu duc eynayay marx uum Eng C/raxmaan Cu mar Cusmaan Yarii sow gudd oomiyihii G/Banaadir ahaana Duqii Muqdi sho ayaa shalay lagu qabtay garoonka kub adda Cagta Kooni
GAROONKA KUBADDA CAGTA EE KOONIS OO LOOGU MAGAC DARAY MARXUUN ENG YARIISOW Kulan loogu duc eynayay marx uum Eng C/raxmaan Cu mar Cusmaan Yarii sow gudd oomiyihii G/Banaadir ahaana Duqii Muqdi sho ayaa shalay lagu qabtay garoonka kub adda Cagta Koonis ee M/Mu qdisho,kaasi oo haatan loogu magac daray Marxuum Eng Yariisow. Munaasabaddan ducada ah ayaa waxaa ka qaybgalay madaxweynaha Soomaaliya, Md.Maxamed C/hi Farmaajo , guddoomiya ha Aqalka Sare Md. Dr.Cabdi Xaashi C/hi, R/Wasaaraha Xasan Cali Khayre ,xubnaha golayaasha kala duwan ee dowladda ,kum anaan dadweyne ah oo ka kala yimid degmo oyinka G/Banaadir iyo mas'uuliyiin kale.
Mas’uuliyiintii ka hadashey munaasabad daasi ducada ayaa qirtay in Marxuum Yarii sow uu ahaa shaqsi ku weynayd wadaniya da,dal iyo dowlad jacaylka iyo inuu horumar gaarsiiyo bulshadiisa.
Madaxweynaha Soomaaliya, Md. Farma ajo oo khudbad ka jeediyay munaasabadaa si ducada ayaa ku dhawaaqay in Garoonkaa si Koonis hadda kadib loogu magacdaray Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan (Eng Yariis ow). Mas’uuliyiintan iyo shacabki tagay go obtaas ayaa Eebbe uga baryay inuu jannadii Fardowsa uu ka waraabiyo,waxana madax da dowladdu ay balanqaadeen inay ka war qabidoonaan qoyskii uu ka tagay marxuum Eng Yariisow.
MADAXWEYNE FARMAAJO: CADAWGEENA AAN UGU TAGNO MEELAHA AY KU DHUUMAALAY SANAYAAN
Madaxweynaha Soo maaliya, Md. Farm aajo oo ka qaybgalay isku soo bax loogu du ceeyay guddoomiyi hii geeri yoo day ee G/Banaadir ahaana duqaMuqdisho, marx uun C/xmaan Yariisow ay aa sheegay in la joogo xilligii goobaha ay joo gaan loogu tagi lahaa, [cadawga].
Madaxweynaha ayaa tilmaamay inuu muddo dheer qaadatay, dagaal uu ku sheegay mid ka argagixisada, isaga oo marka ku baaqay in si wadajir ah lagu wajaho argagixisada.
"Dagaalka argagixisadu waxa uu soo soc day muddo dheer, hadda waxa ay kaga soo hartay inay is qarxiyaan markii ay u babac dhigi waayeen ciidamadeena geesiyaasha ah.Waa in aan adkaynno amnigeenna iyo wadashaqaynteenna, cadawgana aan ugu tagno meelaha ay ku dhuumaalaysanayan.” ayuu yiri madaxweyne Farmaajo.
Madaxweyne Farmaajo hadalkiisa wuxuu ku soo aadday xilli 7baadyo ka hor kooxda AlShabaab ee xiriirka la leh Al Qaacida ay sheegatay weerar ka dhacay gudaha xarun ta dowladda hoose ee Xamar, iyada oo dhis maha uu ka mid yahay kuwa sida aadka ah loo wardiyeeyo, waxaana weerarka ku dhin tay gud doomiyihii gobolka iyo guddoomiyey aal degmo.
FAAH FAAHIN QAABKII UU U DHACAY QARAXII XARUNTA MAAMULKA GOBOLKA BANAADIR
Dowladda Soomaaliya ayaa shalay war bixin hor dhac ka soo saartay qaraxii 24kii bishii July ee ka dhacay xarunta dowladda Hoose ee Xamar kaasoo sababay geerida 8 ruux oo uu ka mid ahaa Duqii Muqdisho Eng Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisoow.
Haddaba warbixinta dowladda ayaa lagu xusay in qaraxan ay ka danbeysan qof Dum ar ah oo ka tirsaneyd shaqaalaha dowladda hoose, iyada oo gacan ka heleysa qof kale oo ku qorneyd kaaliye shaqaalana ka aheyd isla xarunta dowladda hoose.
Warbixintan Dowladda laguma muujin magacyada 2da gabdhood, balse warbixin lagu daabacay bogga VOAda ayaa lagu fa ah faahiyay warbixinno ku saabsan 2da gab dhood iyada oo la soo xiganayo qaar ka mid ah laammaha Amniga.Gabadha is aarxisay sida ay hay’adaha amnigu sheegeen waxay in muddo ah isticmaalaysay magaca Basira Cabdi Maxamed, laakiin magaceeda dhabta ah waxaa uu ahaa "Maryan”
Gabadha 2aad ayaa iyana ku shaqayn aysay magaca "Deggan”, balse magaceeda dhabta ah waa "Hodan”. Waxay Sidoo kale Hodan ka been sheegtay iskuulka ay dhigan aysay markii shaqada la qorayey.
Hodan Waxaa la aaminsan yahay inaysan ku dhimman weerarka, ayna u baxsatay dhul ka ay AlShabaab ka taliyaan.
2da Gabdhood oo mar fasax qaatay ayaa la sheegay in markii ay fasaxa qaadanayeen ay ku horraysay Hodan, kadibna Maryan oo soo laabatay maalmo ka hor dabbaaldegya dii xorriyadda.
Maryan ayaa ku dadaashay inay ka qaybgasho munaasabadaha 26ka Juun iyo 1da Luulyo oo 2daba Madaxweynuhu ka qaybgalay, hase yeeshee waxaa baaritaan ku jira inay doonaysay in madaxweynaha ay bartilmaameedsato.
Warar dhinaca amniga ah waxaa ay she egeen In la bixiyey digniino ku saabsan dha qdhaqaaqa aan caadiga ahayn. Ma cadda In labada dumarka ah si gaar ah loo xusay.
Saraakiishu waxaa ay sidoo kale aamin san yihiin In Allaha u naxariisto guddoomiye Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan uu lacag dhan 10 kun oo dollar siiyey Maryan markii ay u sheegtay inay dhakhtar u tageyso Hind iya ah taasi oo been noqotay, siday xogaha amnigu sheegeen.Labadan Gabdhood ayaa la sheegay in maalintii qaraxa midkoodna la baarin, ayna tageen xafiiska guddoomiyaha iyagoo codsanaya inay la kulmaan balse loo sheegay in uu mashquulsan yahay.
Warbixinta ay soo saartay dowladda ee ku saabsan falkii is qarxinta ahaa ee ka dha cay xarunta dowladda hoose laguma shee gin in bartilmaameedka qaraxu ahaa wakiil ka gaar ah ee Q/ Midoobey Jemas Swan oo ay Alshabaab sheegeen inay beegsanay een.
Madaxweynaha Galmudug Axmed Duca ale Geelle Xaaf ayaa ku dhawaaqay inuu ka tanaasulay u tartamida do orashadda Madax tinimada maamulka Galmudug, isla markaan a uusan ka mid no qon doonin Musharaxiin ta. Md.Xaaf ayaa sheegay in Galmudug xillig gaan ay wa jaheyso Xaalad adag oo u baah an in lala shaqeeyo shaq sigii loo doorto Madaxweynaha Galmudug, islamarkaana aan la mucaar adin.
Waxaa uu sheegay in Muca aradka iyo do wladda dhexe ee Soomaaliya ay lugaha ku dhag een 2dii Sano ee uu ahaa Madaxweyna ha Galmudug isagoo sheegay inuu waxbad an ka qabtay dhanka dib u heshiisiinta. Hadal ka Md. Xaaf ayaa yimid xilli maalm ihii ugu dambeeyay ay soo baxayeen warar sheega ya in Md.Xaaf uu ka mid noqon doo nin Mu sharaxiinta xilka Madaxweynaha maa mul ka Galmudug.
Madaxweyne Xaaf ayaa todobaadyadii u gu dambeeyay ku sugnaa M/Muqdisho ka dib markii uu heshiis la gaaray dowladda dhexe ee Soomaaliya oo Muddo dheer uu khilaaf kala dhaxeeyay.
8da bisha Dil Xijah, ayaa ku dhawaad 2a Malyan oo qof waxay gudanayaan waajib aad ka Xajka, waana maalinta loo yaqaan Ya wmu Tarwiyah. Dadka xajinaya ayaana ka am ba baxaya maalada Mak kah ayagoo sii maraya Mina ugana sii gudba ya Carafa, halkaas oo la istaagi doono barri oo Sabti ah. Marka laga yimaado dadka ka soo xaji yey gudaha Sucuudiga, waxaa dib adda Xaj ka ka soo aaday dad kor u dhaafay hal mal yan iyo 800 oo qof oo gudanaya tiir ka shan aad ee ka midka ah tiirarka Isla amka.
Muslimiinta oo bilaabay acmaasha Xajka
Masuuliyiinta Sucuudiga ayaa sannadka an soo kordhiyey tareen xawaare sare ku so conaya oo ay u bixiyeen "tareenka dheeree ya ee 2da Xaram" kaas oo isku xiraya 2da magaalo ee barakaysan ee Makkah iyo Madi na, sidoo kale xujayda u qaadaya goobaha barakaysan sida Mina, Carafa iyo Mustalifa, asagoona sii maraya buundada dhagax tuur ka.
Mashruuca tareekan oo ka kooban 35 tar een, ayaa looga golleeyahay in lagu qaado xujay kor u dhaafaysa 150 xaaji, wuxuuna galayaa 64 safar toddobaadkan, tareenkan
ayaana ka kooban 417 kursi.
Mashruucan ayaa looga golleeyahay in lagu fududeeyo safarka iyo isu socodka Xujayda, iyo in laga fududeeyo daalka iyo cidhiidhiga oo marar badan ay ku dhintaan dad boqolaal qof gaaraya, gaar ahaan marka dhagax tuu rka lagu jiro. sucuudiga oo 400,000 qof ka celiyey Xajka Xajka Soomaaliya laga a ado muxuu uga qaalisan yahay kan dalalka gob olka? Mashruucaan oo Shiinuhu uu hirgal iyey sanadihii 2009 iyo 2010 ayaa waxaa ku baxay 1.8 bilyan oo dollar. Waajibaadka Xaj ka ayaa sannad kasta bilo wda 8da bisha Dil Xijah waxayna socdaan tan iyo 13ka ee isla bishaas.
IGAD OO KA HADASHAY MOWQIFKEEDA DOORASHADA MADAXTINIMO EE JUBBALAND
Waxaa maalmahan howlo shaqo M. Kis maayo u joogay Wafdi kasocda Urur Gobole edka IGAD kuwaas oo u kuur galayay Xaalada doo rashooyinka Jubbaland.
Wafdigu wuxuu inta uu joogay kismaayo uu kula mo la qaatay masuuliyiin kala duwan oo ay kamid yihiin. Musharaxiinta Mad axweynaha ee is diiwaan galiyay. iyo kuwa aan diiwaan gashanayn. Odayaasha dhaqan ka. Ururada Bulshada. Xildhibaanada Fede raalka ah ee laga soo doortay Jubbaland. gu doonka Baarlamaanka Jubbaland iyo Gud iga madaxa banaan ee xuduudaha iyo door ashooyinka.
Danjirahu wuxuu sheegay in IGAD ay ca daynayso in ahmiyad gaar ah ay leedahay doorashooyinka Baarlamaanka iyo mida Ma daxweynaha ee Jubbaland ka dhacaya taas oo horay usii wadaysa geedi socodka yagle elida Dowladnimada iyo maamul wanaaga kuwaas oo xoojin doona amniga xasiloonida iyo kobaca hormarka bulshada.
Dr Maxamed Guyow wakiilka IGAD wux uu intaas ku daray in uu adkaynayo baahida loo qabo qabsoomida doorashooyin madax banaan oo qaab hufan ku dhaca oo loo sim an yahay taas oo waafaqsan Dasturka KMG ah ee JFS iyo Dastuurka DGJ si arintan loo xaqiijiyo waxaa uu sheegay in Shacabka iyo hogaanka Jubbaland ay ugu baaqayaan in nabada iyo xasiloonida laga wada shaqeeyo wuxuu intaas ku daray in wixii cabashooyin ah ee soo baxa wada hadal lagu dhameeyo iyadoo shacabka loo turayo.
Wafdiga ayaa goordhow ka dhoofay gar oonk diyaaradaha Caalamiga ah ee Sayid Maxamed Cabdille Xasan iyagoo beesha caalamka la wadaagi doona sida howlaha doorashooyinka Jubbaland ay u socdaan.
MIDOWGA EUROPE OO SOMALIYA UGU DEEQ DAY DHAQAALE WAX LOOGA QABANAYO ABAARAHA
Golaha Europe ayaa shaaca ka qaaday inay 50 Million oo Euro oo dheeraad ah ugu deeqayso dadka Beeraleyda iyo Xoolaleyda ee ay Abaarta ku hayso dhowr dal oo ku yaa lla Geeska Afrika. Madaxa Kaalmadda Aad minimadda iyo Maareynta Xiisadaha ee M/Europe, Christos Stylianides oo u dha shay Jesiiradda Qubrus ayaa sheegay inay EUda ku tallaabsanayso Taageeridda dad ka ay waxyeelladu ka soo gaaray Abaaraha ku dhuftay Geeska Afrika.
Waxa uu sheegay inuu dhowr jeer soo bo oqday dalalka ku yaalla Gobalka, isla mark aana uu ku soo saaray sida ay Cimilada u waxyeeleysay Geeska Afrika.
Madaxa Kaalmadda Aadminimadda iyo Maareynta Xiisadaha ee Midowga Europe waxa uu intaasi ku daray inay Kaalmadda ay bixinayaan inay kordhin doonto Taageeradda Aadminimo ee Deegaanadda ay Abaartu waxyeeleysay, isla markaana ay Bulshooyinka ka taageeri doonto khatarta Macluusha.
Xirmadda Kaalmadda Cus ub ee EUda oo dhan 50 Million oo EURO waxaa la gu taageeri doonaa dadka ay Abaartu saamaysay ee ku nool dalalka Somalia, Ethiopia, Kenya iyo Uganda.
Deeqdaasi waxay dalalkaasi u kala heleen sidatan: Somalia 25 million oo Euro, Ethiopia 20 Million oo EURO, Kenya 3 million oo EURO iyo Uganda 2 million oo EURO.
Lacagahaasi kaalmadda waxay si toos ah loogu caawini doonaa Kaalmadda Cunt adda degdegga, Taageerida baahida cunta da, Adeegyadda Asaasiga ee Caafimaadka iyo daaweynta carruurta ay nafaqadarada hayso ee da’doodu ka hooseyso 5jirka, Ha weeenka Uurka leh iyo Hooyooynka naaska nuujiya carruurta iyo Nolosha Qoysaska.
Dhinaca kale, Hadalqoraal oo la soo dhi gay Barta EUda ayaa lagu sheegay in Dee qdan cusub ee dheeraadka ay ka dhigayso Dhaqaalaha Guud ee ay EUda ku bixiyeen Gargaarka Aadminimadda ee Geeska Afrika ilaa 366.5 million oo EURO tan iyo sannadkii hore ee 2018ka.
CUNUGII YOUTUBEKA LAGA JECLAA OO GEERIYOODAY
Wiil 6 sano jir ah oo xiddig ka ahaa barta Youtubeka, isla markaana Muuqaaladiisa majaajilada ah si weyn looga jeclaa dalka Burundi iyo meelo kale oo ka tirsan caalam ka ayaa u geeriyooday cudurka malaariyad a. Darcy Irakoze, oo caan ku ahaa naaneys ta Kacaman, ayaa dhiganayay dugsiga ho ose, waxaana uu ka qeyb qaadan jiray ba ndhigyo online ah iyo kuwo laga sameyn jir ay masraxyada.
Xanuunka Malaariyada ayaa ku dhacay maalintii Arbacada, wuxuuna geeriyooday hal maalin ka dib.
Cudurka Malaariyada ayaa dalka Burundi ku dil ay in ka badan 1,800 oo ru ux sanadkan oo kaliya, si da ay sheegtay Hay'adda Caafimaadka Adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo WHO.
In ka badan 5 malyan oo kiis, oo Malaariya ah ayaa waddankaas laga diiwaan galiyay tan iyo bishii Janaayo.
Cudurkan ayaa ka mid ah kuwa ugu waawe yn ee laaya carruurta qaaradda Afrika, wax aana maalin walba qaaradda gudaheeda ugu dhinta 2,500 oo carruur ah, sida laga soo xigtay hay'adda arrimaha carruurta u qaabilsan Qaramada Midoobay ee Unicef.
Darcy wuxuu bandhiggiisii majaalilada ee ugu dambeeyay sameeyay 2dii bishan Ago osto, waxaana ku wehlinayay majaajiliistaha caanka ah ee reer Burundi ee lagu magac aabo Kigingi.
Waxaa jiray bandhig kale oo Kigingi uu qorsheynayay inuu dhawaan lasoo sameeyo cunugan lix jirka ahaa.
Kigingi ayaa BBCda u sheegay in geerid an ay khasaare weyn ku tahay isaga shakhsi ahaan iyo guud ahaan waaxda madadaala da ee dalka Burundi.
Dhimashada Darcy ayaa kicisay dood xo og leh oo laga sameynayo kiisaska malaari yada ee sanadkan sare u kacay.
Tirada dadka Malaariyada ugu dhinta dalka Burundi ayaa la baratameysa tirada dadka uu cudurka Ebola ku dilo waddanka ay dari ska yihiin ee Koongada Dimuqraaddiga, sida ay sheegtay hay'adda WHO.
Kiisaska Malaariyada ayaa heer aad u sar reeya ka gaaray waddankaas, inkastoo dowl adda Burundi ay muran galisay qiyaasta.
Wasiirka Caafimaadka Thaddée Ndikumana ayaa warfidiyeenka u sheegay in tiradu ay in taas ka yartahay, oo ay tahay 4.3 milyan oo kiis iyo 1,400 oo dhimasho, sanadkan gudihi isa.
Wuxuu intaas ku daray in hoos u dhac uu jiro, maadaama sanadkii 2017kii ay tiradu ahayd 4.9 malyan oo kiis iyo 4,300 oo dhimasho.
Laakiin WHO ayaa diiwaan galisay in sa nadkii 2017kii guud ahaan dunida ay kiis aska cudurkan gaareen 220 malyan iyo 435,000 oo dhimasho.
In ka badan 90% ka mid ah tiradan ayaa gaar ku ah qaaradda Afrika oo kaliya.
DAD KU DHAAWACMAY SHIL KA DHACAY D/ MANDERA EE W/BARI KENYA
Ugu yaraan 20qof ayaa la dhigay Isbitaal ka Mandera, kadib, markii ay dhaawacyo ka soo gaareen baskii ay la socdeen oo ku qal ibmay Deegaanka Hareri ee duleedka Deg madaas
Inta badan dadka dhaawacmay waxaa soo gaaray dhaawacyo jabajab u badan, si da uu sheegay Xoghayaha Degmadda Man dera, C/raxmaan Maalim Xuseen Ugu yar aan 2 qof oo ka mid ah rakaabka dhaawac may ayaa la sheegay in laga jaray gacmaha, kadib, markii uu jajajb xooggan ka soo gaa ray gaariga ku qalibmay waddada isku xirta Mandera iyo Raxmu.
Dhinaca kale, inta badan dadkii ku dhaaw acmay shilkaasi oo la hadlay Saxaafadda iy agoo dul saaran sarriiraha Isbitaalka waxay ku eedeeyeen Dareewalka inuu si xawli ah u kaxeynayey Baska, taasi oo sababtay inuu gaariga qalibmo.
"UGU DAMBEYN NOLOSHA WAAN KA RAJO DHIGAY, HADDAAN TOORRI HEYSAN LAHAANA WAAN ISDILI LAHAA"
Nin u dhashay dalka Cambodia ayaa la soo badbaadiyay ka dib markii uu 4 maalmo od ku xayir naa labo dha gax dhexdo od,kuwaa soo uu ku dhex dhacay maal in tii Axadda.
Ninkan ayaa marka ay arrintani ku dhaceysay waxa uu saalada kibilliga ka raadinayay dha gaxyo ku yaalla dhul buuraley ah oo howdha dhexdiisa ah.
Sum Bora ayaa simbiriirixday isasoo damc aya inuu soo qabsado tooshkii uu watay oo ka dhacay, sida ay sheegeen booliska ka howlgala gobolka waqooyigagalbeed ee Battambang.
26 jirkan oo ay ka dhamaadeen raashinkii iyo biyihii uu watay ayaa la helay maalintii Talaadada, ka dib markii ay qoyskiisa billaab een inay raadiyaan. Howlgalkii goobtaas loo ga soo saaray ayaa socday muddo 10 saaca dood ah, waxaana ka qeyb galay ilaa 200 oo ka mid ah shaqaalaha gurmadka.
Saraakiisha ayaa sheegay in hadda lagu daweynayo isbitaal maxalli ah.
"Ugu dambeyn nolosha waan ka rajo dhi gay, haddaan toorri heysan lahaana waan is dili lahaa", ayuu yiri Mr Bora, oo ka hadlayay muuqaal laga soo duubay, sida uu tabiyay wargeyska Khmer Times.
Saalada Kibilliga ee uu ninkan soo gu ranayay ayaa loo isticmaalaa bacriminta be eraha, waxaana aad looga jecelyahay dalka Cambodia, oo kamid ah waddamada ugu saboolsan koonfurtabari ee qaaradda Aasiya.
Mr Bora oo ku dhex xayirmay dhagaxya da buurta lagu magacaabo Chakrai ayaa wa xaa ugu dambeyn helay saaxiibkiis oo inta badan u imaan jiray si uu saalada ula soo guro.
"Aniga iyo saaxiibkeyga waxaan nahay caato, marka wuxuu kasoo dhex xaluushay dhagaxyadii, wuxuuna iigu yimid meeshii aan ku jiray", ayuu yiri Bora.
Kooxaha gurmadka deg degga ayaa goor da mbe tagay halkaas, balse markii ugu horrey say waxay ku guul darreysteen inay kasoo saaraan, maadaama meesha buurta godke eda laga galo ay tahay mid aad u yar. Ha se yeeshee koox kale oo badan ayaa goobta lagu geeyay diyaarad helikobtar ah, si ay gacan uga geystaan badbaadinta nin kaas.
Xaaska Mr Bora oo lagu magacaabo Koeun Sothea, ayaa warbaahinta u sheegtay in se ygeeda laga daweeyay dhaawacyo ka gaa ray madaxa, jilibka iyo xabadka.
Ms Sothea ayaa sidoo kale uga mahad cel isay ra'iisul wasaaraha Cambodia Hun Sen sida uu ugu soo diray gurmadka, isagoo qoyska siiyay deeq lacageed oo gaareysa $2,500 oo doolar. Taliyaha booliska, Sareth Viseth , ayaa warbaahinta maxalliga ah u sheegay in hadda la mamnuucay koritaanka buuraha, si looga hor tago dhibaatooyinka noocan ah.
SUUDAAN OO CAFIS U FIDISAY LABA HOGGA AMIYE OO DIL KU XUKUNNA
Ciidamada talada Suudaan haya ayaa cafis u fidiyey laba hog gaamiye oo horay dil loo ga xukumay iyaga oo dalka Suudaan Musaaf uris kaga maqnaa.
Malik Agar, oo ah mada xa dhaqdhaqaaqa jabh adda xoreynta shacabka Suudaan ee waqo oyiga dalkaasi ka dagaallata (SPLMN), iyo ku xigeenkiisa Yaasir Arman oo ay dowlad da Suudaan ku xukuntay 2014kii.
Kacdoonnada dalka Suudaan ayaa Sept ember 2011ka ka billaawday gobolka Blue Nile.
Madaxa golaha ku meel gaarka ciidama da Abdel Fattah alBurhan, ayaa xilka kala wareegay madaxweyne alBashiir bishi April.
Warbaahinta dowladda ayaa qaar ka mid ah magacyada dadka la cafiyey sheegtay iney ku jiraan hoggaamiyeyal kale oo mucaarad ah oo ay magacooda sheegin
WASIIR KA TIRSAN XUKUMADDA ZIMBABWE OO XABSI LOO TAXAABAY
Madaxweynaha dalka Zimbabwe Emmer son Mnangagwa ayaa xilka ka qaaday wasiir ka dalxiiska Prisca Mupfu mira, kaddib markii ay guddiga la da gallanka musuqmaasu qa ku soo eedeeyeen la cago la lunsaday xilligii ay iyadu ahayd wasiirka shaqada iyo dammaa nad qaadka bulshada.
Lacagta malaayiinka dool ar ee wasiiradda lagu ee deeyey iney lunsatay waxaa laga wa ayey qa snadda dadka howlgabka ay lee yihiin, waxa ana lagu soo oogay dacwad ah iney ku tak rifashay lacag dhan $94 milyan oo doolar.
Balse Ms Mupfumira ayaa diidday eedda loo soo jeediyey.
Wakaaladda wararka ee AFP waxay she egtay Ms Mupfumira in xilka wasaradda sha qada laga qaaday bishii Nove mber 2017kii.Wasiiraddan ay aa noqoneysa wasiirki u gu ho rreyey oo xil ka qabta xukumad da Man angagwa oo xabsi loo taxaabo.
Nin Maraykanka ku noolaa ill aa yaraan tiisii oo balse laga tar xiilay M/ Detroit ayaa ku dhintay dalka Ciraaq sida uu sheegay garyaqaankiisa.Jimmy Al Daa'uud oo 41 jir ahaa ayaa la sheegay in uu Ciraaq ka heli waayay dawada Insulin taas oo uu u qaadanayay xanuunkiisa macaanka.
Waligiis ma uusan tagin Ciraaq, afka carabig ana ma uusan aqoonin, hase yeeshee wax aa halkaas loo tarxiilay bishii June xili la tarxiilayay dadka kasoo jeedda Ciraaq ee mar uu ku dhacay xukun maxkamadeed.
Edward Bajoka oo ah garyaqaanka Jimmy ayaa sheegay in qofkan macmiilkiisa ah hor ey ay maxkamad u xukuntay, laguna heley dambi.
Balse Laanta socdaalka waxa ay sheeg tay in ninkan 20 jeer uu xukun ku dhacay muddo 20 sanno gudahood ah, waxaana ka mid ahaa haysashada hub sharci darro ah iyo guryo uu u dhacay. Waxa ay laanta int aas ku dartay in la siiyay daawo ku filan ka hor intii aanan la tarxiilin.
Hay'adda xuquuqda aadanaha ee Hum an Rights Watch ayaa carbaareysay geerida Jimmy, waxayna sheegtay in aysan la yaab ahayn natiijada ka dhalan karta sharciyada socdaalka ee Maraykanka. Qoyska ninkan oo ku sugan magaalada Detroit ayaa la she egay in ay ka fikirayaan sidii ay dacwad u fur an lahaayeen.
Bishii June 2017kii, maamulka Trump ay aa Maraykanka ka tarxiilay illaa kun qof oo reer Ciraaq ah, taas oo timid kadib heshiis la la gaaray dowladda Ciraaq, taas oo shuruud looga dhigay in maamulka Trump uu Ciraaq ka saaro liiska dalalka dadkooda aysan u safri karin Maraykanka.
Muuqaal aad loogu baahiyay baraha bul shada ayaa muujinayay Jimmy oo ka had laya sidii Ciraaq loogu tarxiilay, iyo sida uu dhibka uga marayo xanuunkiisa macaanka. Waxa uu sheegay in uusan dawo ku hay sanin Ciraaq.
Jimmy ayaa waxa uu ku cataabayaa in la caawiyo, isaga oo dowladda Maraykanka ka codsada in la celiyo. Xildhibaan ka tirsan Aqalka Congresska Maraykanka, kana soo gala gobolka Michigan Andy Levin ayaa ku dooday in aysan ahayn in markii horeba la tarxiilo Jimmy.
BOQOLAAL MUHAAJIRIIN AH OO LAGA SOO DAAD GURAYNAYO LIIBIYA
Dowladda Rwanda ayaa ku dhawaaqday inay qaabili doonto 500 ka mid ah Kumana anka Muhaajriinta Afrikaanka ee ku xayiran dalka Libya. Hawsha daadgureyntooda wa xaa iska kaashan doona Dowladda Rwanda, UNHCR, IOM, iyadoo Ururka Midowga Euro pe ee EU bixin doonan Kharajka lagu daadguran doono 500 Muhaajiriin ee la qorshey nayo in dib loo dejiyo dalka Rwanada.
Yaboohaasi ayaa waxa uu la xiriiraa sab abo dhinaca Aadminimada, iyadoo Madaxw eynaha Rwanda, Paul Kagame horey u bal lan qaaday qaabilaada Muhaajiriintaas sana dkii 2017kii.
Wax soo saarkii kalluunka ee warshadda Laasqoray ayaa in muddo ahba hakad ku jira, laakiin waxaa soo baxaya warar she eg aya in kalluunkii astaanta warshaddan lahaa uu kasoo ba xo meelo kale.
Arrintan ayaa lagu qeexay in magacii Warshada laasqoray si been abuur ah lo ogu adegsaday kaaluun ku jira gasacado, oo ah noocii warshadda lagu yaqaannay.
Sheekadan oo ay dad badan uga hadleen baraha xiriirka bulshada ayaa lagu shee gay in kalluunka sawirradiisa la isla dhex marayo uu kasoo baxo waddanka Thail and oo ka tirsan dalalka qaaradda Aasiya, inkastoo aysan BBCdu xaqiijinin sheeg ashadaas.
Magaca been abuurka ee lagu sheeg ay in laga xadayo warshadii laasqoray, ayaa waxaa ka hadalay Cali Maxmud Xas san "Cali Ceelaayo” oo kamid ahaa howlw adeennada warashadda laasqoray, wuxuu na arrintaas ku tilmaay inay tahay xatooyo lagu sameenayo astaantii ganacsiga warshadda.
BBCda ayuu uga warramay sida ay xogtan ku heeleen: "Mas’uuliyiinta warsha dda Laasqoray ayaan ka mid ahaa mana ogi meesha kalluunkaas uu kasoo baxay, laakiin dad arkay ayaa ilasoo xiriiray, oo i weydiiyay in warshadda kalluunkeeda uu hadda soo baxo, waxaana u sheegay in howlihii warshadda ay hakad ku jiraan wax kalluun ah oo ay soo saartay ama ay mar dhow iibisayna aanu jirin, kalluun kasta oo magaceedu ku qoran yahay, oo meel kas ta oo caalamka ka mid ah lagu gadana uu yahay been abuur”, ayuu yiri Cali Ceel aayo.
Wuxuu sheegay in isagu uusan arkin kalluunkaas balse ay xogta soo gaarsi iyeen dad jooga dalka dibaddiisa, mar uu arrintaas ka hadlayayna wuxuu yiri: "Meelo ka baxsan Soomaaliya ayay macaamiishii warshadda igala soo hadleen, waxay i dhaheen; ‘kalluun ay ku qoran tahay La asqoray Tuna ayaa noo yimid, ma idinkaa soo saaray?’, aniguna waxaan u xaqiijiyay in aannaan howsheennii wali dib u bill aabin.
Ceelaayo ayaa sidoo kale sheegay in cid walba oo soo saarta kalluun wata ast aanta warashaddooda "ay khiyaaneen mac aamiisha, warashaddana ay dambi ka galeen”.
"Waddamada Kalluunka Soomaaliya looga keeno waxaa ka mid ah Thailand la akiin anigu ma ogi inay iyada tahay me esha lagu soo sameeyay kalluunkaas as taanka Laasqoray wata. Hadda ka hor dad ayaa Kenya geeyay kalluun laga keenay Thailand oo loo isticmaalay magacii Laasq oray, marka waxaa jira dad jecel inay ka faa’iideystaan tayada kalluunka la jecelya hay ee ay soo saari jirtay warshadda, sid aasna ku isticmaala magaceeda”, ayuu sii raaciyay hadalkiisa.
CAUTIONARY NOTICE TRADEMARK(in the territory of
NOTICE IS HEREBY GIVEN thatEezdee Intrade Sdn Bhd/ Company incorporated and existing under the laws of Malaysia/ Objectives: Manufacturers and Merchants, Malaysian company with head office at45-1, Jalan Wangsa Delima 2A, Pusat Bandar Wangsa Maju, 53300 Kuala Lumpur, Malaysia.
Is the owner and sole proprietor Limited company of the following trade mark.
The above trademark is used in the international classes 29
Class 29:Meat; fish (not live); poultry, not live; meat extracts; vegetables, cooked; vegetables, dried; vegetables, preserved; fruit, preserved; fruits, dried; fruits, cooked; fruit jellies; fruit puree; jams; eggs; milk; powdered milk (other than for babies); condensed milk; milk products; edible fats; edible oils.
GANACSADE CALI AADAN MARGUUS OO SHALAY LAGU DILAY BEER UU KU LAHAA DULEEDKA BAYDHABO
Wararka ka imaanaya M/Baydhabo ayaa sheegaya in gana csadaha caanka ah Cali Aadan Xuseen (Cali Marguus) lagu dilay shalay beer uu ku lahaa de egaanka Maaya Fuulka ee duleedka Baydh abo.
Dilkiisa ayaa la sheegay inuu la xiriiro arrimo dhul la isku heystay maalmahan oo ka taagnaa duleedka Bay dhabo, iyadoo xiisada ka dhalatay is heysadkaas ay sababtay dad dhowr ah loo dilo. Wararka ayaa sheegaya in Cali Marguus ay dabley hubeysan ku dhex dileen beertiisa, waxaana sanadihii u dambeeyay ahaa ganacsade dhanka beeraha, waxaana uu dadka ku dhaqan Gobolada Koofur Galbeed ku baraarujin jiray wax soo saarka beeraha.
Allaha u naxariistee Cali Marguus ayaa ahaa siyaasi hore iyo mid ka mid ah dadka hal doorada sida weyn looga yaqaanay dee gaanada Bay iyo Bakool, tobankii sano ee u dambeeyay kuma lug laheyn wax siyaasad ah.
OGEYSIISKADIGNIINTA EE CALAAMADA GANACSIGA
Exxon Mobil Corporation, waa shirkad abaabulan oo ku jirta sharciga Gobolka New Jersey (U.S.A.) of 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, United States of America
Macdanta, dhulka, dhagaxyada, asphalt, bitumen, baaruudka, fosillada, shidaalka adag & dareeraha, coke & shidaalka agglomerated. Saliidaha saliida leh & dhamaan alaabada kale ee fasalka.
OGAYSIISKA AYAA SIDOO KALE LA BIXINAYA in talaabo sharci ah laga qaadi doono shaqsi kasta ama shirkad isticmaasha sumadda ganacsiga ee la sheegay ama wixii ku dayasho mudan ama haddii kale ku xadgudbay xuquuqda shirkadda la sheegay.
OGEYSIISKA AYAA HALKAN LAGU SIIYA in calaamada kor ku xusan ay tahay astaanta ganacsiga ee:
Alaab dheeri ah oo qaran.5 & 7. Macdanta, dhulka, dhagaxyada, asphalt, bitumen, marmar, sulphur, fossil, shidaalka adag & dareeraha, coke & shidaalka; saliidaha saliida & dhammaan waxyaabaha kale ee fasalka; alaabada kiimikada ee warshadaha, sawir qaadista, haraaga, bacriminta dabiiciga & dabiiciga ah, walxaha kiimikada ee beeraha.
Macdanta, dhulka, dhagaxyada, rafufka, bitumen, marballadda, baaruudda, fosillada, shidaalka adag & dareeraha, coke & shidaalka agglomerated. Saliidaha saliida leh & dhamaan alaabada kale ee fasalka.